News | A Bank | Reliable Commercial Bank in Myanmar
A bank “ ကျိုက်လတ်ဘဏ်ခွဲ” စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း A bank ၏ (၁၈)ဘဏ်ခွဲမြောက် “ ကျိုက်လတ်ဘဏ်ခွဲ ” ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈)ရက်နေ့(အင်္ဂါနေ့) တွင် A bank ကျိုက်လတ်ဘဏ်ခွဲတည်ရှိရာ အမှတ် (၉၉)၊ (၁၀)လမ်း နှင့် (၁၁)လမ်းကြား၊ ဦးစန္ဒာလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၇)ရုံးပိုင်ရပ်၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအေးလွင်၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဉီးအောင်မြတ်ခိုင်၊ A bank ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအာယု နှင့် A bank အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးရဲမြတ်စိုး တို့မှတက်ရောက်၍ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ A bank “ […]
ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အခမ်းအနားအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၂၅ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့)တွင် Pan Pacific Hotel ၏ Grand Ballroom တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
A bank နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး Samsung S20 Series အားအတိုးနှုန်းမဲ့ (၆)လ အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ …
(၁) Samsung S20 Series အား HP စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူရာတွင် Online (EKYC) မှလည်းကောင်း၊ ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်၍ လည်းကောင်း၊ A bank နှင့် Dealership ချုပ်ဆိုထားသော Samsung Sales Center (အရောင်းစင်တာ) သို့သွားရောက်၍လည်းကောင်း လျှောက်ထားဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (၂) လျှောက်ထားချက်များကို ဘဏ်ခွဲမှစစ်ဆေးပြီး အတည်ပြု/မပြု ကို (၃)ရက်အတွင်း ပြန်လည်အကြောင်း ကြားပေးပါမည်။ (၃) A bank မှ အတည်ပြုချက်ရရှိပါက ဝယ်ယူသူသည်နီးစပ်ရာ ဘဏ်ခွဲသို့သွားရောက်၍ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ချေးငွေစာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး ကနဦးပေးသွင်းငွေကို ပေးသွင်းရပါမည်။ ဘဏ်ခွဲမှထုတ်ပေးသော Delivery Order ရယူ၍ […]
ယခုအချိန်အခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများ၌ COVID19 ရောဂါပိုးသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါသည်။ ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank) သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောဂါပိုးစတင် မဝင်ရောက်မီ ကာလကပင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ Business Continuity Plan (ဝန်ဆောင်မှုအား ဆက်လက်ပေးသွားနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် စီမံချက်) များအား ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ရောဂါပိုးကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး A bank ဝန်ထမ်းများနှင့် Customer များ အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများကိုလည်း ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ A bank အား ပိုမိုအောင်မြင်တိုးတက်လာစေသည့် […]
လုံခြုံသောငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် A bank Mobile Banking ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ
လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်သော ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား Online မှတစ်ဆင့် A bank mobile banking ကို အသုံးပြု၍ 24/7 မိမိအိမ်တွင်နေပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ မိမိအကောင့် အချင်းချင်းငွေလွှဲပို့ခြင်းနှင့် မိမိအကောင့်မှ အခြားအကောင့်များသို့ငွေလွှဲ့ပို့ခြင်းများကို အထူးဒေသမြို့ကြီးများမှ လွဲ၍ အခြားမြို့များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ ငွေလွှဲခ အခမဲ့ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်…. မိမိငွေစာရင်းလက်ကျန်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ခြင်း၊ အင်တာနက်ဘေလ်ဖြည့်ခြင်း စသော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကို မိမိအိမ်မှာပဲနေပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ ။ #mobile_banking #StayHome #Abank #Standing_with_you
A bank ဝန်ထမ်းများနှင့် Customer များအတွက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ
ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank) အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် A bank အသုံးပြုသူလူကြီးမင်းများ ဘဏ်သို့လာရောက်ရာတွင် ရောဂါပိုးကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ – ဝန်ထမ်းများအားလုံးနှင့် Customer များ ဘဏ်အတွင်းသို့မဝင်ရောက်မှီကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း။ – ရောဂါပိုးသည် လက်မှတဆင့်စတင်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်သဖြင့် လက်သန့်ဆေးရည် (Hand Sanitizer) များအားစဉ်ဆက်မပြတ်ထားရှိပေးခြင်း။ – နှာခေါင်းမှတဆင့် ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် မျက်နှာဖုံးများ (Face Mask) များနှင့် လက်အိတ်များအသုံးပြုစေခြင်း။ – Customer Waiting Area တွင် Social Distancing (လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးထိတွေ့မှုလျှော့ချခြင်း) အနေဖြင့်ခုံများအား (၃) ပေအကွာတွင် ထားရှိစေခြင်း။ – အရေးပေါ်အခြေအနေကာလတွင် […]
လတ်တလော ဖြစ်ပွါးနေသော COVID -19 ရောဂါအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှု ရှိစေရန် A bank ဘဏ်ခွဲများအားလုံးတွင် လိုအပ်သော ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များအား လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ယခင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သော Customer များအတွက် လက်သန့်ဆေးရည် (Hand Sanitizer) များထားပေးခြင်း၊ လက်ဆေးရမည့်နေရာများ ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်း ၊ဘဏ်အတွင်းသို့ မဝင်ရောက်မှီ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း နှင့် social distancing အတွက် Customer များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ၃ပေမှ ၆ပေအကွာအဝေးအတွင်းသာ bank လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ ရယူနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်းတို့အပြင် ရုံးချုပ်နှင့်ဘဏ်ခွဲများအားလုံးအား ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းပေးခြင်း ၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအားလုံးအား နှာခေါင်းစည်း (mask) ၊ Hair Cap ၊ […]
“Mask တပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့”
COVID – 19 ကာလအတွင်း မဖြစ်မနေ အပြင်သို့ ထွက်ရမည်ဆိုပါက နှာခေါင်းစည်း (mask) ကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။ Mask တပ်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ရော အများအတွက်ပါ ကာကွယ်ရာရောက်ပါသည်။ ကျန်းမာဘေးကင်းဖို့အတွက် mask ကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်လေးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် .. – Mask မဝတ်ဆင်မီ လက်သန့်ဆေးရည် (သို့) ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့် လက်ဆေးပါ။ – ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကို Mask ဖြင့် သေချာဖုံးထားပါ။ မျက်နှာနှင့် Mask အကြား မဟနေရပါ။ အပေါ်ရှိ အလွှာအမာကို နှာခေါင်းတွင် ဖိချထားရန် ဖြစ်ပါသည်။ – Mask ဝတ်ဆင်ထားစဉ် လက်ဖြင့် မထိရ။ […]
A bank ရန်ကုန်ရုံးလိပ်စာ အသစ်ပြောင်း‌ရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း
A bank ရန်ကုန်ရုံးလိပ်စာအသစ်အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့မှစတင်၍ ” အမှတ်(၁၀၈)၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းနှင့် နတ်မောက်လမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ” သို့ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ထား ပါကြောင်းနှင့် အသစ်ပြောင်းလဲထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်သစ်များသို့ A bank ၏မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် Customer များသိရှိဆက်သွယ်နိုင်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ (+၉၅-၁) ၉၅၅၉၁၉၉၊၉၅၅၉၃၉၉ ၈၄၃၀၉၆၃~၆၆ #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm #New_Head_Office
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ လမ်းညွှန်မှုအရ COVID -19 ကာလအတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းချိန်အား နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ မွန်းလွဲ (၂:၀၀) နာရီအထိ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားပါ‌ကြောင်း A bank အသုံးပြုသူ လူကြီးမင်းများအား သိရှိနိုင်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၆) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓနေ့) ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် အခါသမယတွင် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေကြောင်း A bank မိသားစုမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။ အဆိုပါနေ့တွင် A bank ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲများအားလုံးပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး A bank Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုအား ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ #Abank #Standing_with_you #full_moon_day #kason_festival www.abank.com.mm
နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၈/၂၀၂၀) အရ A bank သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ SME လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ချေးငွေ အတိုးနှုန်းများအား ၁.၅.၂၀၂၀ မှစတင်၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများတွင်လည်းကောင်း၊ A bank Customer Hotline Number 09 780 227722 သို့လည်းကောင်း ၊ A bank Facebook Page သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ #Abank #Loan #SME #interest_rate #Standing_with_you www.abank.com.mm
A bank ၏အပ်ငွေအတိုးနှုန်းများအား (၁၁-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစတင်ပြီးအောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များကို နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများသို့လည်းကောင်း၊ Customer Services Phone Number 09780227722သို့လည်းကောင်း၊ A bank Facebook Pageသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ #Abank #Standing_with_you #interest_rate www.abank.com.mm
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၁၂) ရက်နေ့ မှစတင်၍ A bank ဘဏ်ခွဲများအားလုံး တွင် ယခင် သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း နံနက် (၀၉:၃၀) မှ မွန်းလွဲ (၃:၀၀) နာရီ အထိပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကာ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ #Abank #Standing_with_you #Banking_Hour www.abank.com.mm
ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း (Call Deposit Account)
လူကြီးမင်းတို့၏ တစ်နေ့တာ ဘဏ်စာရင်းလက်ကျန်အပေါ် တွင် နေ့စဉ်အတိုးရယူလိုပါသလား ??? A bank မှာ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း (Call Deposit) ဖွင့်လှစ်ပြီး ငွေကျပ် တစ်သိန်းနှင့်အထက်အား #အမြင့်မားဆုံးအတိုးနှုန်း ၅%p.a ဖြင့် #နေ့စဉ်အတိုး တွက်ချက်ပေးနေပါပြီ … #တစ်နေ့စုတစ်နေ့တိုး မည့် A bank ၏ Call Deposit (ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း) အား လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ အပ်နှံလိုသည့်နေ့တွင် နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများနှင့် Customer Services Hotline Number 09 780227722 သို့လည်းကောင်း၊ […]
ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ ငွေလွှဲပါ
A bank Mobile Banking Application ကို အသုံးပြု၍ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါပြီ … အကောင့်အချင်းချင်းပဲလွှဲမလား … မှတ်ပုံတင်နဲ့ပဲ လွှဲမလား … ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ ယခုပဲငွေလွှဲလိုက်ပါ… COVID ကာလမှာ လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင် ဘဏ်သို့သွားရောက်ရန် မလိုပဲ A bank Mobile Banking Application ဖြင့် A bank တွင် အကောင့်ဖွင့်ထားသူများသာမက #အကောင့်မဖွင့်ရသေးသောသူများ နှင့် #Mobile Bankingအသုံးမပြုသူများ ထံသို့ပါ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်းခြင်း ကင်းဝေးပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ A bank Mobile Banking Application ဖြင့် ယခုပဲစတင်ငွေလွှဲလိုက်ပါ… […]
Mobile Banking Password Policy
လုံခြုံစိတ်ချရပြီး Security မြင့်မားသော Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် ယခုအသုံးပြုနေသော Password အား Strong Password ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်ပါ ……. လူကြီးမင်းတို့၏ mobile banking ကို လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Password ကို စနစ်တကျ လွယ်ကူမှန်ကန်စွာ ( Strong password ) ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါတယ်ရှင် Password ပြောင်းဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Password Policies များကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင် … – Password ကို အနည်းဆုံး 8လုံး ၊ အများဆုံး 16လုံးအထိ ပေးနိုင်ပါတယ်။ – အက္ခရာ စာလုံးအကြီး […]
A bank (Hire Purchase) ဝန်ဆောင်မှု
ကားဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုတာနဲ့ A bank Hire Purchase ဝန်ဆောင်မှုကို သတိရလိုက်ပါနော် … ကားတန်ဖိုးငွေ အပြည့်အဝပေးချေစရာမလိုပဲ လစဉ်အရစ်ကျပေးသွင်းရုံဖြင့် မိမိစိတ်ကူးထဲက ကားလှလှလေး တစ်စီးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် … – သက်သာသောအတိုးနှုန်း 10% နှင့်အတူ – ချေးငွေသက်တမ်း အများဆုံး ၅နှစ် အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး – မြန်ဆန်တိကျသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် A bank Hire Purchase ဝန်ဆောင်မှုကို နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများနှင့် A bank နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Dealership Car Showroom Company ကြီးများတွင် ယခုပဲ သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ […]
Corporate Partnership Announcement (Pun Hlaing Hospitals x A bank)
Pun Hlaing Hospital နဲ့ A bank တို့ ဂုဏ်ယူစွာ လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကျန်းမာပျော်ရွှင်သာယာလှပတဲ့ အနာဂတ်ဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်နိုင်ရန် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဆောင်ရွက်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော Joint Commission International (JCI, USA) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ပန်းလှိုင်ဆေးရုံနှင့် မြို့ကြီးများတွင် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၂၁ ခုဖြင့် တီထွင်ကြံဆမှုအားကောင်းသော ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နေသော ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည့် A bank တို့ ပူးပေါင်းပြီး အဆင့်မှီအရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို တဟုန်ထိုးဝန်ဆောင်မှုပေးတော့မှာပါ။ စျေးကွက်ထဲမှ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု အကျိုးခံစားခွင့် အခွင့်ထူးများရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့် စောင့်မျှော်ပေးကြပါနော်။ We are truly […]
လူကြီးမင်းစိတ်ကြိုက် ကားဝယ်မယ်ဆိုရင် A bank ၏ Hire Purchase (အဌားဝယ်စနစ် အရစ်ကျချေးငွေ) ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ…
– ကားသစ်လေးတစ်စီး ဝယ်ချင်နေပြီလား .. – ကားတန်ဖိုးငွေ အပြည့်အဝပေးချေစရာမလိုပဲ လစဉ်အရစ်ကျငွေပေးသွင်းရုံဖြင့် မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ကားသစ်လေး တစ်စီးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် … – ကနဦးပေးသွင်းငွေ အနည်းဆုံး 20% မှ 40% ပေးသွင်းပြီး သက်သာသောအတိုးနှုန်း 10% နှင့်အတူ ချေးငွေသက်တမ်း အများဆုံး (၅) နှစ် အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင် .. – မြန်ဆန်တိကျသော ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် A bank Hire Purchase (အဌားဝယ်စနစ် အရစ်ကျချေးငွေ) ဝန်ဆောင်မှုကို နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ယခုပဲ သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီရှင် […]
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အညီ လွှဲပြောင်းနိုင်သောစာချုပ်စာတမ်းများအက်ဥပဒေအရ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘဏ်စာရင်းပိတ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့) တွင် A bank ၏ဘဏ်ခွဲများအားလုံး ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) တွင် A bank ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများအား ယခင်အတိုင်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း Customer များအား လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ A bank internet banking နှင့် mobile banking ဝန်ဆောင်မှုများကို ၄င်းဘဏ်ပိတ်ရက်များတွင် ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ #Abank #Standing_with_you
Ar Yu International Hospital နှင့် A bank တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံဖြစ်သည့် @Ar Yu International Hospital နှင့် A bank တို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအားလုံးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှ ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ We are honored to announce that @Ar Yu International Hospital has agreed to collaborate with A bank on 23rd September 2020 to deliver high quality international healthcare services to Myanmar […]
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက် (စနေနေ့)သည် “ဒီပါဝလီနေ့”ဖြစ်သောကြောင့် အများပြည်သူတို့၏ အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပြီး အစိုးရရုံးပိတ်ရက်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် “ဒီပါဝလီနေ့” ရုံးပိတ်ရက်အား၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၃)ရက် (သောကြာနေ့)ဖြင့် အစားထိုးပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသောကြောင့် ထိုနေ့တွင် A bank ၏ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲများအားလုံးပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက် (တနင်္လာနေ့)တွင် A bank ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများအား ယခင်အတိုင်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း Customer များအားလေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ A bank Internet Banking နှင့် Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုများကို ၄င်းဘဏ်ပိတ်ရက်များတွင်လည်း ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ #A bank #Standing_with_you
Abank Call Center
A bank ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိနိုင်စေရန် 24/7 Call Center ဖုန်းနံပါတ် 09-770707888 သို့ ပိတ်ရက်မရှိ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ #Abank #Callcenter www.abank.com.mm
TURBO SAVE ( GET MORE, GET FAST, GET OFTEN )
TURBO SAVE GET MORE, GET FAST, GET OFTEN GET MORE? ငွေများများစုပြီး အတိုးနှုန်းအများဆုံး (7.3%)p.a ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်… GET FAST? -ငွေများများစုပြီး အတိုးနှုန်းမြန်မြန်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်… GET OFTEN? -ရက်(၃၀)သက်တမ်းပြည့်တာနဲ့ သက်တမ်းတိုးနိုင်သောကြောင့် အတိုးနှုန်းကိုတစ်လတစ်ခါရတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပြီပေါ့… A bank ရဲ့လစဉ်အတိုးထုတ်ယူနိုင်မယ့် ငွေစုဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်တဲ့ #TURBO_SAVE နှင့်မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါပြီ…ငွေကျပ် သိန်း(၅၀၀) နှင့်အထက် ထားရှိရုံနဲ့ #TURBO_SAVE အဖြစ်အတိုးနှုန်း 7.3% p.a ကိုလစဉ်ရရှိနေမှာဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေ့မှစ၍ စတင်ငွေစုနိုင်ပါတယ်… #TURBO_SAVE ရဲ့ထူးခြားချက်အဖြစ်များများစု များများရပြီး လစဉ်အတိုးမြန်မြန်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမို့ လက်မလွှတ်ရအောင် အခုဘဲ A bank ကိုမြန်မြန်လှမ်းလာခဲ့ပါနော်… […]
A bank သည် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ (၂၇)ရက်နေ့ စတင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ယခုချိန်ခါတွင် (၅)နှစ်တိုင်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ (၅)နှစ်အတွင်း အတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ် Customer များ၊ A bank ၏အောင်မြင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးခဲ့သော ဦးဆောင်ပေးကြသူများကိုလည်း ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်…. ရှေ့ဆက်ပြီး အနာဂတ်မှာ အများပြည်သူနှင့်အတူ အမြဲအတူ ရှိနေမည့် A bank အား ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်စေရန် အတူတကွလက်တွဲကြရင်း A bank မိသားစုက နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလျှက်ရှိပါတယ်….လူကြီးမင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ ဥစ္စာဓနဖြိုးကြွယ်ဝပြီး လိုရာဆန္ဒ များ ပြည့်ဝကြပါစေကြောင်း ဆုမွန် ကောင်းများပို့သအပ်ပါသည်…. #Abank #Standing_with_you #5thanniversary
eBanking ကိုအသုံးပြုဖို့ A bank Website ကနေ Online Registration နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလျှောက်ထားနိုင်ပြီ..
eBanking ကိုအသုံးပြုဖို့ A bank Website ကနေ Online Registration နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလျှောက်ထားနိုင်ပြီ… အခုလို Stay at Home ကာလမှာ A bank ရဲ့ eBanking အသုံးပြုဖို့အတွက် အရင်လိုဘဏ်ခွဲအထိလာရောက်စရာမလိုဘဲ Online ကနေ Register ပြုလုပ်ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်…. Online Registeration လျှောက်ထားဖို့အတွက် အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ email၊ နေရပ်လိပ်စာနဲ့ လျှောက်ထားသူရဲ့ဓာတ်ပုံတို့ကို မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီး ဘဏ်ဖွင့်ရက် (၁)ရက်အတွင်းမှာဘဲ စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Username , Password တို့ကိုအကောင့်လျှောက်ထားစဉ်က ဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့ email သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…. A bank ရဲ့ eBanking […]
အဖိုးတန်ပစ္စည်းများလုံခြုံစိတ်ချဖို့ A bank ရဲ့ Safe Deposit Locker သုံးကြစို့
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ၊ လက်ဝတ်ရတနာစိန်ရွှေငွေများ နဲ့ အရေးကြီးစာချုပ်စာတမ်းများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ A bank ရဲ့ Safe Deposit Locker ဝန်ဆောင်မှုအသစ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…. A bank ရဲ့ Safe Deposit Locker ကို တစ်ဉီးချင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ဉီးနှင့်အထက်တွဲဘက်၍ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားအသင်းအဖွဲ့များ Safe Deposit Locker ကိုငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်း အချိန်မရွေးလာရောက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်… လူကြီးမင်းတို့ အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ပစ္စည်းများကို စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး အာမခံချက်အပြည့်အဝရရှိမဲ့ A bank ရဲ့ Safe Deposit Locker နဲ့လာရောက်သိမ်းဆည်းလိုက်ပါ…. အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Call Center 09770707888ထံသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်…
လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ A bank Hire Purchase နဲ့အတူလက်တွဲစို့ !
A bank SME Business အနေနှင့် တောင်သူဦးကြီးတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးတက်စေရန် A bank Hire Purchase နဲ့ ချေးငွေထုတ်ယူပြီး စက်မူနည်းပညာ၏ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြီး အောင်မြင်မှုတိုးတက်လမ်းဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါပြီ။ တောင်သူ ဦးကြီးတို့အတွက် Royal Moters Co.,Ltd နှင့် တောင်ပေါ်သားရီရှင်း စိုက်ပျိုးရေးCo.,Ltd မှ ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်သော လက်တွန်းထွန်စက်၊ ရိတ်သိမ်းစက်၊ စပါးအခြောက်ခံစက်များကို လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ကာလမှာ-အများဆုံး ၅ နှစ်သက်တမ်း ငွေပမာဏမှာ-သန်း ၂၀ မှ သန်း ၁၀၀အထိ A bank Hire Purchase များ လာရောက် […]
နှစ်သစ်မှာ ဘေးဘယာကင်းကွာပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် ဥစ္စာဓနဖြိုးကြွယ်ဝပြီး နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပြုံးပျော်ရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းများပို့သအပ်ပါသည်….. #ဘဏ်ပိတ်ရက် ကြေညာခြင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့(နိုင်ငံတကာ နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့), ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့(နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့) နှင့် ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်နေ့(လွတ်လပ်ရေးနေ့)သည် နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက် နှင့် လွတ်လပ်ရေးရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်ပါသောကြောင့် အဆိုပါနေ့များတွင် A bank ၏ ရုံးချုပ် နှင့် ဘဏ်ခွဲများအားလုံးကို ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး A bank ၏ Internet Banking, Mobile Banking ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများအား ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ #A bank #Standing-with-you #Happy_New_Year […]
A bank ၏ ချစ်ခင်လေးစားရပါသော Customer များအား အတိုးငွေခံစားရရှိစေရန်နှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းအတိုးနှုန်းများထုတ်ယူခြင်း၊ စုဆောင်းငွေများအပ်နှံခြင်းများအတွက် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလသည် ဘဏ်ပိတ်ရက်များဖြင့်တိုက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် အတိုးတွက်ချက်ပေးမည့်ကာလအား ဇန်နဝါရီလ၊ (၈)ရက်နေ့အထိ ယာယီတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးထားပါသောကြောင့် လာရောက်စုဆောင်းနိုင်ပါရန် လေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်… #Abank #Standing_with_you
100DayFixed ကိုအတိုးနှုန်း8%p.a သို့ထပ်မံတိုးမြှင့်​ပေးလိုက်ပြီ
Abank Customerများကြိုက်နှစ်သက်သည့် ချက်ချင်းစုချက်ချင်းအတိုးထုတ်ယူ လို့ရသည့် 100DayFixed ကိုအတိုးနှုန်း8%p.a သို့ထပ်မံတိုးမြှင့်​ပေးလိုက်ပါပြီ… A bank ၏ ရက်(၁၀၀) စာရင်းသေအပ်ငွေအား စဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးခဲ့ကြသော လူကြီးမင်းများအတွက် ကနဦးအပ်နှံငွေ ဆယ်သိန်းကျပ်ဖြင့် စတင်အပ်နှံပြီး အတိုးနှုန်း 8% p.a ကို ချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ … ချက်ချင်းစုချက်ချင်းအတိုးများများထုတ်ယူ နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလေးကို လက်လွှတ်မခံဘဲ နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်ပြီး ရယူပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါနော် … အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများနှင့် Customer Services Phone Number 09770707888 သို့လည်းကောင်း၊ A bank Facebook Page သို့လည်းကောင်း […]
A bank မှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု(အခမဲ့)ဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေအား လှူဒါန်းနိုင်ပါပြီ
Covid-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေ COVID-19 Vaccination Fund လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် A bank eBanking ဖြင့်သော်လည်းကောင်း နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများမှသော်လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်ခ “အခမဲ့”ဖြင့် (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသို့ အလှူငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။ A bank eBanking မှတစ်ဆင့်လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် A bank eBanking ကို Log in ဝင်၍ Bill payment မှတဆင့် Covid-19 Vaccination Donation ကိုနှိပ်ပြီး ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ” COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရေးရန်ပုံငွေအတွက် A bank eBanking နှင့် နီးစပ်ရာ A […]
Promotion ကာလဖြစ်တဲ့ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ A bank Digital Banking ကိုအသုံးပြုပြီး A bank အကောင့်အချင်းချင်းငွေလွှဲခြင်း၊ Internet/ Mobile Banking မှ မှတ်ပုံတင်သို့ငွေလွှဲခြင်း၊ အခြားဘဏ်များသို့ ငွေလွှဲခြင်း အစရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့အတူ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာငွေလွှဲပြီး CASH BACK Promotion တွေရယူလိုက်ပါ။ ” Business အတွက် ” လစဉ်ပထမဆုံးငွေလွှဲအကြိမ်ရေ (၂၀) အတွက် တစ်ကြိမ်ငွေလွှဲတိုင်း အများဆုံး ကျပ် (၂,၀၀၀) ဖြင့် တစ်လလျှင်အများဆုံး (၄၀,၀၀၀) ကျပ် ငွေလွှဲခအတွက် CASH BACK ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး Promotion ကာလသုံးလစာအတွက်စုစုပေါင်း […]
၂၀၂၁ ခုနှစ် မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ A bank ရဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစတင်အသုံးပြုမဲ့ Customer အသစ်များအတွက် ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ကူးငွေသားလက်ဆောင်များပေးမည့်အစီအစဉ်များရောက်ရှိလာပါပြီ… A bank မှာ အပ်ငွေစုဆောင်းပြီး Online Banking Account ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ Customer အသစ်များအတွက် New Year Gift Cash အနေဖြင့် (၂၀၂၁) ကျပ် ကိုစုငွေအကောင့်အတွင်းထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…. A bank Online Banking Account ဖွင့်လှစ်ရင်း ငွေသားလက်ဆောင်များပျော်ရွှင်စွာ ရယူလိုက်ကြရအောင်… ** A bank eBanking အကောင့်ဖွင့်လှစ်ပြီးသည်နှင့် ငွေကျပ် (၈၀၀) အားပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး Promotion ကာလဖြစ်သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့မှ ဧပြီလ(၃၀)ရက်နေ့အတွင်း ငွေစုအကောင့်မှ အနည်းဆုံးငွေလွှဲ(၁၀) […]
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး အခမ်းအနားအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်(အင်္ဂါနေ့)တွင် A bank ၏ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် နတ်မောက်လမ်းထောင့်ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ #Abank #Standing_with_you #Annual_General_Meeting
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်ကုတင် (၇၀) ဆန့် HDU အဆောင်နှင့် ဆရာဝန်သူနာပြုများ နားနေဆောင်အား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း
Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd, A Bank, ဝိတိုရိယဆေးရုံ နှင့် ပုသိမ်စက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်းတို့ မှ COVID-19 ရောဂါခံစားနေရသော Oxygen Therapy လိုအပ်လျက်ရှိသည့် လူနာများအတွက် မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) ခန့် ကုန်ကျသည့် ကုတင် (၇၀) ဆန့် HDU အဆောင်နှင့် ဆရာဝန်သူနာပြုများ နားနေဆောင်အား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် COVID-19 Pademicကာလတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တစ်တပ်တအားပါဝင်ကုသပေးသော ဆရာဝန် သူနာပြုများ အတွက် အထွေထွေရန်ပုံငွေ သိန်း ၂၀၀ ကျပ်အား ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ #Abank #Donate #COVID19 #LetFightTogether #CSR #Standing_with_you
Trust Deposit ဝန်ဆောင်မှုအသစ်နှင့်အတိုးနှုန်းများ
A bank ၏ မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ် Customer များအတွက် အပ်ငွေအတိုးနှုန်းများပိုမိုရရှိပြီး အပ်နှံငွေများကို စိတ်ချယုံကြည်စွာစုဆောင်းနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ Trust Deposit ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို A bank ဘဏ်ခွဲများတွင် ဖွင့်လှစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။ Trust Deposit များအပ်နှံရာတွင် ငွေသားအပ်နှံ၍ အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အကောင့်တွင်းမှ ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ကာလအတိုးနှုန်းထုတ်ယူခြင်းများအတွက် ၁၀၀% အပြည့်အဝပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Trust Deposit အပ်ငွေစာရင်းအသစ်များအား အောက်ဖော်ပြပါ အကောင့်အမျိုးအစားအလိုက် အတိုးနှုန်းများဖြင့် A bank ဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် စိတ်ချယုံကြည်စွာဖြင့်အပ်နှံထားနိုင်ပါသည်။ Trust Call (၁)လ အတိုးနှုန်း—၆% Trust Saving (၁)လ အတိုးနှုန်း— ၈% Trust Fixed (၁)လ အတိုးနှုန်း—၈% […]
Trust 100Days Fixed အပ်ငွေစာရင်းအသစ်
A bank Customer များ ကြိုက်နှစ်သက်သော ချက်ခြင်းစုချက်ခြင်းအတိုးထုတ်လို့သည့် Trust 100Days Fixed အပ်ငွေစာရင်းအသစ် Trust 100Days Fixed အပ်ငွေစာရင်းအသစ် ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ငွေသားအပ်ငွေများကို ရက်(၁၀၀) စာရင်းသေအပ်နှံပြီး အတိုးနှုန်းများကို 8.25% ဖြင့် ငွေသားချက်ခြင်းထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ချင်းစုချက်ချင်းအတိုးထုတ်ပြီး ထုတ်ယူထားတဲ့အတိုးတွေကိုပြန်စုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ထပ်ဆင့်အတိုးတွေခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများမှာ လာရောက်အပ်နှံပြီး အတိုးနှုန်းများချက်ခြင်းထုတ်ယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်… Trust 100Days Fixed နဲ့ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များရှိပါက နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများနှင့် A bank Call Center ဖုန်းနံပါတ် 09770707888 သို့လည်းကောင်း၊ A […]
ဧရာ၀တီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank)
ဧရာ၀တီတောင်သူလယ်သမားများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (A bank) သည် အောက်ဖော်ပြပါ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးအပ်လျှက်ရှိပါကြောင်းနှင့် A bank Online Banking ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို 24/7 ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း လေးစားအပ်သော Customer များအား အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ – ငွေသွင်းခြင်း (အပ်ငွေ/ ချေးငွေ) – ငွေထုတ်ခြင်း – Payment Order (PO) ထုတ်ပေးခြင်း။ – Clearing – Transfer စာရင်းပြောင်းခြင်း – Fixed Deposit သက်တမ်းတိုးခြင်း – စာရင်းသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း A bank ၏ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များရှိပါက A bank Call Center […]
Mobile Banking ကို Biometric Login နဲ့ စမတ်ကျကျ သုံးကြမယ်
Mobile Banking အသုံးပြုဖို့ username နဲ့ password ကို ခဏခဏ ရိုက်ထည့်‌နေရတုန်းဘဲလား ? A bank ရဲ့ Mobile Banking မှာလုံခြုံမှုမြင့်မားပြီး လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ Biometric Login စနစ်နဲ့ စမတ်ကျကျ Login ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီနော်… ပထမဦးဆုံး စတင်ဝင်ရောက် အသုံးပြုတဲ့ တစ်ကြိမ်တည်းသာလျှင် username နှင့် password ကို ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုဖို့အတွက် application setting ထဲမှ ” Enable Biometric Login ” ကို ” On” ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်… ” အခုဘဲ A bank Mobile […]
ငွေသားအပ်နှံ၍ ​‌ငွေသားချက်ချင်း ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သော Trust Deposit
A bank ရဲ့ Trust Account များဟာဆိုရင်တော့ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ် ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေရသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့ငွေစုအကောင့်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကာလရှည်စုဆောင်းလိုသူများအတွက်လည်း ကာလအလိုက်အတိုးများများစီစဉ်ပေးထားပါတယ်… ငွေသားသွင်း၍ လျင်မြန်လွယ်ကူစွာငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သလို Trust Account အချင်းချင်းငွေလွှဲပို့မည်ဆိုရင်လည်း ငွေလက်ခံရရှိသည့်အကောင့်မှ ငွေသားကိုချက်ချင်းပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်…. Trust Account နဲ့ဆိုရင် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ် ကိုစိတ်တိုင်းကျ အကန့်သတ်မရှိဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုဘဲ နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများမှာ လာရောက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါ… A bank Trust Account များဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက် အကောင့်ဖွင့်လှစ်လိုသည့်သူကိုယ်တိုင် မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်အတူ နီးစပ်ရာ A bank ဘဏ်ခွဲများမှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါပြီ။ “Save Money at A bank for Better […]
A bank မှမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ပြည်သူများနှင့်လုပ်ငန်းများ အချင်းချင်း​​ငွေ​ကြေးချိတ်ဆက်မှု့ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် မကြာမီ​နေရာအနှံ့သို့​ရောက်ရှိလာ​တော့မည့် A+ (A Plus) မိုဘိုင်း​ငွေ​ကြေးဝန်​ဆောင်မှု့အား မိတ်ဆက်ခြင်း။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖတ်ရှုရန်
“A bank” officially launches “A+ (A Plus),” the soon to be everywhere mobile financial service to connect people and businesses across Myanmar Read More: A+ Press Release
A bank Viber Community join ပြီးဝန်ဆောင်မှုသတင်းများရယူနိုင်ပါပြီ!
A bank နှင့် A+ Wallet ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုကြသည့် Customer များအတွက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုသတင်းများနှင့် ပရိုမိုးရှင်းသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် A bank Viber Community ကို ယနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော Customer များထံသို့ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။ A bank Viber Community ကိုအခုပဲ https://vb.me/abank မှတဆင့် Join ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
A bank celebratesabrand refresh of A+ Mobile Financial Service. Myanmar, Yangon [2 May 2022] – A bank announcesarefresh of the brand platform for its A+ Mobile Financial Service, launchinganationwide campaign to support the revamp of the A+ brand onasoon-to-be-seen roll-out across […]
၂ ရက် ၊ မေလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်။ A bank မှ A+ (A PLUS) မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု၏ အမှတ်တံဆိပ် (Logo) အား အသွင်သစ်၊ အမြင်သစ်ဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ READ MORE